के को छाडा ? सेक्स सबैलाई चाहिन्छ ! «
के को छाडा ? सेक्स सबैलाई चाहिन्छ !
प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७६, शनिबार १०:२०
चर्चित युबा नाटकार प्रबिण पुमाद्धारा लिखित नाटकलाई जस्ताको त्यस्तै राखेको छौ । युबापुस्ता त्यो पनि आधुनिक युबाको बारेमा चिरफार छ ।
के को छाडा ? सेक्स सबैलाई चाहिन्छ । यो प्रकृतिकै नियम हो । सेक्सलाई कसैले खुलेर गर्छ, कसैले लुकेर, फरक यति मात्रै हो । आवश्यकता अनुसार सेक्सलाई प्रयोग गर्ने नै हो । तर व्यवस्थित तरिकाले, जेपीटी होइन । सहमतिमा सेक्स गर्दा के बिग्रिन्छ र ? च्यातिने होइन, भाँचिने होइन । मनमिलेपछि गरिखाने हो । जवानीको चाहनालाई किन कुण्ठित पार्नु ? आखेरी, उमेरमा सबैलाई सेक्स चाहिन्छ, बुढेसकाल भएपछि सेक्सको के काम ?
दृश्य : दोस्रो
स्थान : रोहोमाको कोठा
पात्रहरू : रोहोमा र छिमीतमा
(रङगमञ्चमा प्रकाश विस्तारै प्रवेश हुन्छ । रोहोमा झोक्रिएर कुर्सीमा बसिरहेकी छिन् । रोहोमाले गिलासमा पानी पिउँछिन् । मोबाइल झिकेर नम्बर डायल गर्छिन् । तर लाग्दैन ।)
(तनावमा) ओ स्याट । (टेबलमा मोबाइल राखेर) यो मान्छे यत्रो दिन कहाँ गयो होला ? अझैं पनि घर आउँदैन । मोबाइल पनि अस्तिदेखि नै स्बिचअफ छ । यो मान्छेले कति सताउँछ ? हैन, यो मान्छे कति स्र्माट हुन्छ है ? मलाई त माटो धुलो जति पनि गन्दैन न त ? । म उसको श्रीमती नै त हैन नि ? किन यो मान्छेले कुरा बुझदैन ? अब यो मान्छेलाई कहाँ खोज्ने होला ? (घण्टी बजेपछि मोबाइल रिसिम गर्दै) हेल्लो । को बोल्नु भा’को ? मुवाहाङ हो ? ।
(पाश्र्वमा) होइन, होइन । म योङमा, दार्जिलिङबाट । चिन्नेनौ छोरी ?
ए, आमा हो ?
(पाश्र्वमा) हो, हो । म तिम्रै आमा हो ।
ए । सेवान्ने आमा ।
(पाश्र्वमा) सेवान्ने, सेवान्ने । सुन त रोहोमा ।
सुन्दै छु, आमा ।
(पाश्र्वमा) तिम्रो लागि ज्वाई हेरिदिएको छौ हो । केटा हेन्डसम छ हो । अङ्ग्रेजीमा पिएचडी गरेको छ हो । गर्भमेण्ट जागिरे छ हो । केटा विद्वान छ हो । सबैले उसलाई सम्मान गर्छ हो । यो केटा तिम्रो पापाको साथीको छोरा हो । मनपराएर भयो भने तिमीहरूको जोडी बाँधिदिने हो । त्यसैले जसरी भए पनि यो आउँदो साकेलामा घर आउनु हो ।
तर यो साकेलामा नै त आउनु सक्दिनँ होला, आमा ।
(पाश्र्वमा) ए हो ।
त्यसो भए हाम्रो प्रस्ताव तिमीलाई मन परेन हो ?
त्यस्तो हैन आमा । तपाईंंहरूको प्रस्ताव राम्रै छ हो । तर अहिले मेरो कलेजमा छुट्टी मिल्दैन हो । मेरो पिएचडीको अनुसन्धान पनि सकिएको छैन हो । फेरि तत्कालै मेरो विवाह गर्ने मुड नै छैन हो ।
(पाश्र्वमा) कोन्त है । तिम्रो विचार हो । हामी त के भन्छौ र हो ? तिम्रै भलाइको लागि हामीले भनेको हो । तिम्रो भविष्यको लागि ज्वाई हेरिदिएको छ हो । तिम्रो भविष्य तिमीले नै बनाउने हो । तिम्रो विवाह गर्ने मुड नै छैन भने हामीले कर लाउने कुरा भएन हो । तर पछि पछुताउनु चाहिँ पाइँदैन नि हो ।
पछुताउदिन आमा । म पनि पढेकै छु हो । धेरै कुरा बुभ्mछु हो ।
(पाश्र्वमा) कोन्त है, कोन्त । पढेको मान्छे मात्रै भनेर हुँदैन हो । सहरमा त विवाह नै नगरी केटाकेटीसँगै बस्छ हो । कोही हेल्पीङ हेण्ड भन्छ हो । कोही लिभिङटुगेदर भन्छ हो । खोइ आजकाल त के–के हो ? के–के ? आजकालको कुरा, म त राम्रो कुरै बुझदिन । तिमी पनि आपैm होस पु¥याउ हो । परदेशको ठाउँमा, चिनेजानेको हुँदैन हो । एक्लै छौ हो । गार्जेन पनि छैन हो । हामीले देख्दैनौ हो । जोसमा होस हुँदैन हो । उमेरमा सेक्सले छेक्दैन हो । आपैm जोगिनु है । फेरि फसिएला नि हो ।
हुन्छ आमा, मेरो बारेमा केही चिन्ता लिनु पर्दैन । म सबै ठिकै छु । बरु, आमा अहिले हतार छ । कलेज जानु ढिलो हुनुलाग्यो हो । फोन राख्नु ल । पछि घरमै आएर बात मारौला ।
(पाश्र्वमा) ल ल ! अनि पिरियोड कस्तो छ ?
रेगुलर नै छ ।
(पाश्र्वमा) पहिला जस्तो पेट दुख्छ कि, दुख्दैन ?
दुख्छ नि, किन नदुख्नु ?
(पाश्र्वमा) ए, ल ल ! आफ्नो हेल्थको पनि केयर गर्नु हो ।
हुन्छ, आमा । बाई । (फोन राखेर) सुड्डी । पेट दुख्छ कि, दुख्दैन भनेर मेरो रिलेसन पो बुज्दोरैछ । मैले पनि मज्जाले ढाँटे हो । बरु सिधैं रिलेसनमा छ कि, छैन भनेर सोध्नु नि ! नथापाउने तरिकाले चेक पो गर्दोरैछ । तर, वास्तवमा मैले गल्ती चाहिँ गरिरहेकै छु । गोप्य रूपमा भए पनि मुवाहाङसँग रेगुलर रिलेसनमा नै छु । मुवाहाङसँग जवानीको रस खाइरहेकै छु । जवानीको पानी पनि प्mयाकी रहेकै छु । तर विवाह गरेको छैन । त्यै पनि रिलेसनको सबै टेस्टहरु लिइरहेकै छु । प्रत्येक आईटमहरू चाखिरहेकै छु । प्राचीन टुँडालको आइटमभन्दा धेरै आइटमहरुको अनुभव गरिरहेकै छु । कयौं महिलाहरू फुलटेस्ट नै नचाखी मर्छ । तर त्यस मामिलामा म चाहिँ भाग्यमानी नै छु । मुवाहाङसँगको रिलेसनमा पूर्ण सन्तुष्टी नै छु । तर सधैं यो खुसी रहिरहन्छ र ? कतै यो खुसीहरूमा पीडा त छैन ? (आकाशतिर हेर्दै) कस्तो डर पो लागेर आउँछ ।
(प्रवेश गर्दै) के हो ताल ? मोबाइल त व्यस्त छ नि ?
अँ, आमासँग कुरा गर्दै थिए ।
ए हो । अनि के भन्नु भयो त, आमाले ?
के भन्नु हुन्छ र ? मेरो लागि केटा हेर्नु भा’कोरैछ । त्यो केटासँग विवाह गर्नुको लागि बोलाउनु हुँदै थियो ।
अनि, के भन्यौ त ?
के भन्नु र ? पछि घर आएर कुरा गरौँला भने नि । अनि तिम्रो के छ ?
झकास छ ।
कस्तो झकास ?
त्यैत हो नि, ब्याइफ्रेन्डसँग । आज पनि खत्त्रा दियो । कस्तो किलै गाड्छ यार । बेहोसै बनाउँछ ।
तर तिमीहरूको परिवार छ, हैन ?
छ नि । किन नहुन ? उसको जापानमा, मेरो बर्मामा ।
तैपनि कसरी यस्तो हुन्छ त ?
भइहाँल्छ नि । जहाँ इच्छा, त्यहाँँ उपाय । घरमा भा’कोले यहाँँ काम दिँदैन, सम्झनाले मात्रै तिर्खा मेटिन्दैन । भोक लागेको बेला ढुङ्गा खानु भएन, माटो खानु भएन । खाने बानी परेकोलाई खानै पर्छ नि । त्यसैले भेट्यो कि, रेट्यो । तर हामीमा अन्डरस्टान्डिङ छ । एकले अर्काको परिवारलाई बचाउँछौ । खाँदा पनि चोरी खाने हो, खुल्ला होइन ।
चर्चित युबा नाटकार प्रबिण पुमा
छ¥या ! कस्तो छाडा कुरा गरेको ।
छ¥या ! यो मान्छे त कस्तो हो ? इत्रिन्छ पो ?
इत्रेको होइन । साँच्चो कुरा गरेको । साँच्चो कुरालाई किन ठाँट्नु ? वास्तविकता जे हो, त्यही भनेको । व्यर्थैमा ढाँटेर किन आडम्बरी बन्नु ? यस्तो कुरा कसैलाई मन पर्छ, कसैलाई पर्दैन । नभा’को कुरा गरिन्दैन, भा’को कुरा छोडिन्दैन । सिधा मान्छेको ठाडो कुरा । रिसाए रिसाउ, खुसाए खुसाउ । रिसाए दुइचार दिन बोल्दैनौ, त्यति त हो ।
छ¥या ! यो मान्छे त कस्तो लाजै पचेको ? हाँकाहाक्की नै पो रिलेसनको कुरा गर्छ ।
के को लाज ? रिलेसनचाहिँ लुकिलुकी राख्ने ? यस विषयमा खुल्नुचाहिँ लजाउने ?
अनि के त ? कोहोलो लाउँदै हिँड्नु त ?
कोहोलो त किन लाउनु प¥यो र ? तर सेक्सको बारेमा एक आपसमा खुल्नुचाहिँ प¥यो । यस विषयमा बहस हुनुप¥यो । सेक्सलाई पहरा बनाउनु भएन । सहमतिमा रिलेसन राख्नु अपराध त होइन नि ! यो त माया पो गरेको त । भावना पो साटेको त । विश्वास पो गरेको त । निकता पो भा’को त । जवानी पो साटेको त । यौवन पो साटेको त । उमङग पो साटेको त । सेक्स प्रकृतिकै नियम हो । त्यैपनि किन सेक्सलाई अवहेलन गरिन्छ ? किन सेक्सलाई समाजिक बहिष्कार गरिन्छ ? किन सेक्सलाई बन्दकोठाभित्र मात्रै सीमित राखिन्छ ? किन महिलालाई मात्र सेक्सको दोषी बनाइन्छ ? के महिला सेक्स साधन मात्रै हो त ? के महिला बच्चा उत्पादनको फ्याकट्री मात्रै हो त ? किन महिलालाई दबाएर राखिन्छ ? किन महिलालाई निर्णायक नेतृत्वमा पु¥याइँदैन ? किन महिलापुरुष बिचको खाँडल झन खनिन्दैछ ? किन महिलालाई सेक्सको भौतिक साधन मात्रै बनाइन्दैछ ? यस्तो कयौंँ प्रश्नहरुको उत्तरहरु आउनु पर्छ । यस्तै समाज रहिरहने हो भने विकृतिको दलदलमा समाज झन फस्ने निश्चित छ ।
यो कस्तो मान्छे रैछ ? मेरो समस्याको समाधान पो गर्नु सघाउँछ कि, भनेर बोलाको त । उसको भाषण पो सुनाउँछ ।
यो भाषण होइन, शिक्षा हो । अभिशाप होइन, विश्वास हो । समस्या होइन, समाधान हो । सबैको विचार सुन । मनन गर । आत्मा विश्वास बढाऊ । तिम्रो समस्यालाई सामान्य लेउ । यसलाई पहरा नबनाऊ । यो तिम्रो मात्रै समस्या होइन, यो भूमण्डलीय समस्या हो । त्यसैले चिन्ता नलिऊ । जे नहुनु थियो, त्यो भयो । जे भयो, भइसक्यो । त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बड । समस्याको समाधान अवश्य हुन्छ । किन व्याथैमा चिन्ता लिन्छौ ?
हुनु ता हो । तर मुवाहाङ नहँुदा गाहे भा’को छ । उसलाई धेरै खोजी सकें । तर भेटिएको छैन । आँधो भएर विश्वास गर्दा सारै दुःख पाइयो । ना मर्नु, ना बाच्नु भैयो ?
छ्या, कस्तो मर्ने कुरा गरेको ? मान्छेले सुन्दा पनि के भन्छ ? मर्ने कुरा त कायरले पो गर्छ त ।
त्यो ता हो नि । तर सारै टेनसन भा’को छ । के गरौँ ? के ?
के गर्नु त, जोसमा होस गुमाएपछि ? अलीअली त टेन्सन भैहाल्छ नि । तर आत्तिनु पर्दैन । मन बलियो पार । विस्तारै सबै समस्याहरु ठिक हुन्छ । (प्रशङ्ग बदल्दै) अनि ? तिम्रो पिरियोड ठिक छ ?
अँहँ, छैन ।
चार महिना भयो ।
यो कुरा मुवाहाङलाई थाहा छ त ?
किन नभनेको ?
भन्नै पाइन । पिरियोड रोकिनुभन्दा अगाडि नै मुवाहाङ गायव भयो ।
त्यै त समस्या । काम गरुन्जेल मज्जा भयो, वास्ता भएन । काम बिग्रियो, प¥यो फसाद । सुरुमै कन्ट्रासेप्mटी प्रयोग गरेको भा लन्ठै साप हुन्थ्यो । कि कन्ट्रासेप्mटीको ज्ञान नै छैन ?
छ नि, किन नहुनु ? तर ज्ञान हुँदाहुँदै पनि फसिए । अहिले आपत प¥यो । फेरि, रेगुलर रिलेसनमा यसको युजमा समस्या हुँदोरैछ । सैद्धान्तिक ज्ञान भएपनि ब्यावहारिक भइन्दैन रैछ ।
त्यै त । के गर्ने ? गर्ने ? आफै कन्फियुजमा छु ।
अब, बेलामा बुद्धी पुग्दैन । अहिले व्यर्थैमा झमेला । कि एर्वोसन गर्ने ?
अँहँ, हुँदैन ।
पाप हुन्छ ।
पाप न साप । आधुनिक जमानामा पनि पाप र धर्मको कुरा गर्ने हो ? समयअनुसार पो चल्नु पर्छ त । धर्ममा होइन, कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ । भाग्यमा होइन, परिश्रममा विश्वास गर्नुपर्छ । भाग्यमै विश्वास गर्ने भए किन पढिराखेको त ? भगवानलाई जप्दै बस्नु नि । भावनाले होइन, दिमागले काम गर, दिमागले ।
तर यो भ्रुणको के दोष ?
त्यै भन्दै बस्यौ भने झन् लफडामा पर्छाै । अनि भुत्रो खान्छौ ।
के गर्नु त ?
भोलि नै कलेज जाउँ । इक्ज्यामको कपीहरू पनि बुझाउ । कलेजमा मुवाहाङ आउँदै छ कि छैन ? त्यो पनि बुझ । म पनि उसको बारेमा बुझ्छ । यो भूमण्डलीकरणले संसार सानो छ । त्यो मुवाहाङ कहाँ पो जान्छ र ? पत्ता लागि हाल्छ नि । चिन्ता लिनु पर्दैन ।
ल, अहिले म गए । अफिस जानु छ । ढिलो भैसक्यो । (जादै) बाई ।
बाई । (छिमीतमा गएतिर हेर्दै) आज आप्mनो बुद्धीले आफै दुःख पाएँ । (प्रकाश विस्तारै विलय भएर रोहोमाको अनुहारमा स्थिर हुन्छ ।)दृश्य : दोस्रो
बाई । (छिमीतमा गएतिर हेर्दै) आज आप्mनो बुद्धीले आफै दुःख पाएँ । (प्रकाश विस्तारै विलय भएर रोहोमाको अनुहारमा स्थिर हुन्छ ।)